Semalt सेयरहरू एक प्रमाणित एन्टी-स्प्याम अभ्यास जसले वास्तवमा काम गर्दछ
स्प्याम हाम्रो दिनहरू दिनको सामना गर्ने दिनहरू मध्ये एक बनिरहेको छ। लगभग सबै इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताको कहीँ ईमेलहरू वा उनीहरूको ब्लग टिप्पणीहरूमा स्प्याम हुन्छ। केहि अनुसन्धानबाट, सबै ईमेलहरूको लगभग% 77% स्पाम हुन्। स्पाम ईमेलहरूमा असंख्य ट्रोजन, वर्म्स वा मालवेयर हुन्छन् जुन तपाईंको कम्प्युटरमा विभिन्न हानिकारक कार्यहरू गर्न सक्दछन्। धेरै स्प्यामरहरू हेकरहरू वा पार्टीहरू हुन् जुन उनीहरूका बिषयको लागि खराब मनसाय भएका छन्। तिनीहरूले बिभिन्न प्रतिकूल आक्रमण गर्छन् र प्रायः तिनीहरू सफल हुन्छन्।
स्प्याम ईमेलहरूको अर्को प्रमुख केस फिशिंग हो। यी स्पाम ईमेलहरू हुन् जसले लग ईन गर्न जस्तै कार्यको माग गर्दछ, केवल तपाईंलाई एक नक्कली क्लोन पृष्ठमा लैजानको लागि। फिशरहरू उनीहरूको स्वामित्वमा भएका व्यक्तिहरूबाट धेरै पासवर्डहरू र व्यक्तिगत जानकारीहरू हटाउँदछन्। केहि केसहरूमा, स्पाम ईमेलहरूले केहि कल-टु-एक्शन कार्यहरू समावेश गर्दछ, जसले सम्भावित हानिकारक वेबसाईटहरूमा लिंकहरू समावेश गर्दछ। तपाईको इ-मेलबाट स्प्याम हटाउनका लागि ठूलो आवश्यकता छ।
Semalt डिजिटल सेवाहरुका विज्ञ, र्यान जोनसनले स्प्यामबाट बचाउनका लागि गर्न सक्ने केहि चीजहरुको बारेमा छलफल गरेका छन्।
१. स्प्याम फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यी अधिक सुरक्षित ईमेल खाताहरूमा उपस्थित छन्। प्रयोगकर्ताहरूले स्प्याम फिल्टरहरू अनावश्यक ईमेलहरू हटाउनको लागि विशेष ईमेल वा मेटाउनको लागि स्वचालित बनाउँदछन्। केहि केसहरूमा, यी ईमेलहरूले केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू समावेश गर्दछ जुन स्पाम जस्तो देखिन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई फोल्डरमा समावेश गर्नुपर्नेछ जहाँ तपाईं क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुनेछ। फिल्टरिंग स्पाम ईमेलहरूले फिसि of जस्ता केसहरूबाट व्यवसाय बचत गर्न सक्दछ।
२. सुरक्षित ईमेल प्रयोग गर्नुहोस्।
केहि ई-मेल सर्भरहरू अरूहरू भन्दा बढी सुरक्षित छन्। अन्य ईमेल प्रदायकहरूको मेल सर्वरहरूमा कुनै सुरक्षा उपायहरू छैनन्। नतिजाको रूपमा, यी ईमेलहरूले स्पाम ईमेलहरू पठाउन प्रोत्साहित गर्न सक्दछन्। एक सुरक्षित ईमेलले भाइरस स्क्यानर जस्ता सुविधाहरू समावेश गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, गुगल मेलले भाइरस को लागी ईमेल मा संलग्न संलग्नकहरु स्क्यान गर्न सक्छन्।
Common. साधारण स्पाम ईमेलहरू वेवास्ता गर्नुहोस्।
केहि स्प्याम ईमेलहरू स्रोतबाट आउँदछ जुन स्प्यामरहरू पहिले नै परिचित छन्। केहि वेबसाइटहरू पहिले नै स्पाम साइटहरू हुन्। तपाईंले त्यस्ता स्रोतहरूबाट प्रत्येक ईमेलबाट अलग रहनु पर्छ। साइटहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि, तपाईं गुगल एनालाइटिक्समा अवस्थित उन्नत स्प्याम फिल्टरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणले स्पाम ईमेलहरू अपरेट गर्ने तरिकामा आवश्यक समायोजन गर्न सक्षम गर्न सक्दछ।
A. स्प्याम ईमेलबाट कुनै लिंक क्लिक नगर्नुहोस्।
धेरै स्पामहरू शिकारलाई कार्य सम्पादन गर्नको लागि हो जुन आक्रमणको जोखिम बढाउँदछ। यी कार्यहरू मध्ये केही आफैंले आक्रमण गर्दछन्। तपाईंले स्प्याम ईमेलबाट लिंक क्लिक गर्नबाट बच्नु पर्छ। यी लि of्कहरू केहि एसक्यूएल ईन्जेक्शन जस्ता कार्यहरू गर्न सक्दछ वा तपाईंको जानकारी सार्वजनिक गर्दछ।
A. स्पाम ईमेलमा संलग्नकहरू न खोल्नुहोस्।
धेरै जसो एट्याचमेन्टमा फाईलहरू हुन्छन् जसमा जानाजानी ट्रोजन र भाईरस हुन्छन्। यी बट्सहरूले तपाइँको कम्प्युटरलाई ह्याकरहरूमा पर्दाफास गर्न सक्दछ साथै ब्राउजर पासवर्डहरू जस्ता बहुमूल्य जानकारी पनि गुमाउँदछ। अन्य केसहरूमा, एक स्पाम ईमेलहरू प्राप्त गर्न सक्दछ जुन वेबसाइट तल ल्याउने लक्ष्यमा छ, सायद अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा।
तपाईका इ-मेलहरूबाट स्प्याम हटाउने धेरै तरिकाहरू छन्। स्पामका धेरै हानिकारक प्रभावहरू छन्, जस मध्ये धेरै जसो शिकार केही प्रलोभन र स्विच ट्रिकको लागि गिरावटको वरिपरि घुम्छ। यस गाईडले तपाईलाई स्पामको विरूद्ध लड्न र अन्य अवस्थाहरू प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ। केहि अवस्थाहरूमा, व्यक्तिहरूले केहि सामान्य स्पाम स्रोतहरू भेट्टाउन सक्छन् र उनीहरूलाई कालोसूची गर्न सक्छन्।